Niteraka firohotan’ny fanaovana sary-sy-soratra tao Brezila ny fampahafantarana ny Ursal — Firaisamben’ny Repoblika Sosialista Amerikana Latina · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 21 Aogositra 2018 9:19 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Español, русский, 繁體中文, Italiano, English
Fangon'ny Ursal (amin'ny teny Paortiogey, midika hoe orsa ny “urso”). Sary nozaraina fatratra an-tserasera, tsy mbola fantatra ny nanao azy.
Koa satria efa antomotra ny fifidianana ho filoham-pirenena ao Brezila, lohahevitra roa no mahazo vahana: voalohany, ny fanantenana hampitoniana ny korontana politika nitelina ny fiainana politika tao anatin'ny efa-taona. Faharoa, ny fanatanjahatena ankafizin'ny firenena, aorian'ny football:sary-sy-soratra (meme).
Daciolo (Ankavia): “Ursal no Lafitra Tontolo Vaovao mitady fampiraisana an'i Amerika manontolo ho tanindrazana komonista Amerikana tokana! Ary ao anatin'izany i Ciro! Hanakana izany amin'ny voninahitry ny Tompontsika Jesoa Kristy izany! Amena!”. Ciro Gomes (ankavanana): “Tsara ny Demaokrasia, zavatra tsara tarehy … fa misy vidiny koa” Sariitatr'i Carlos Ruas, nahazoana alalana.
Nahazoan'ny mpiondana sary-sy-soratra sopapa betsaka ny adihevitra mivantana voalohany tamin'ny fahitalavitra nifanaovan'ny kandidà ho filoham-pirenena tamin'ny 9 aogositra raha nanontanian'i Cabo Daciolo, mpamonjy voina evanjelika mirotsaka ho kandidàn'ny antoko kely farany havanana Patriota (Tia Tanindrazana) ny kandidà iray hizara ny eritreriny momba ny “tetikasa Ursal”.
Araka ny nohazavain'i Daciolo, Ursal no fanafohezan-teny amin'ny teny paortiogey ny Firaisamben'ny Repoblika Sosialista Amerika Latina, lazaina ho drafitra ho fandresen'ny komonista araka ny fomban'ny Firaisana Sovietika izay efa maty.
Nanoloana ny fitsipahan'ny mpiady hevitra aminy ny fahalalàny izany tetikasa izany, dia mbola nanohy i Daciolo:
Eny, fantatrao fa miresaka momba ny drafitra izay antsoina hoe Lafitra Tontolo Vaovao isika, ny firaisamben'i Amerika Atsimo iray manontolo, fifandraisan'i Amerika Atsimo iray manontolo, manala ny sisintany rehetra, manangana firenena tokana, tanindrazana lehibe. Olona vitsy no nandre momba izany, tsy hisy ny hilaza betsaka momba izany. Fantatry ry zareo izay resahanay. Tiako hazava tsara fa, amin'ny governemantanay, tsy hanana sehatra ny komonisma.
Hita avy eo fa teôrian'ny tsikombakomba efa nandeha hatry ny taona maro tany amin'ireo dinika sy bilaogin'ny hery farany havanana ao Brezila ny “tetikasa Ursal”. Nisy tranonkala iray natsangana tamin'ny taona 2015 nantsoina hoe Dosie Ursal manangona ny “porofo” rehetra amin'ny fisian'izany drafitra izany.
Ankehitriny anefa, rehefa hitan'ny besinimaro ampahibemaso izany, dia tena tian'ireo sehatra an'aterineto progresista ao Brezila ilay hevitra. Tao anatin'ny andro vitsivitsy dia efa nanana sarintany, fango, hiaka, pasipaoro, ekipa football ary hiram-pirenena i Ursal.
Avy amin'ny mpisera Twitter malaza Thiago Mota:
Manomboka izao aho hiady isan'andro ho fananganana ny URSAL
Amin'ny teny Paortiogey midika hoe orsa ny “urso”, ka izany no mampirongadra ny sary-sy-soratra ahitana orsa maromaro.
Amin'ny maha-sosialista aty Amerika Latina dia adidintsika ny manokana fotoana sy vola hanaovana ny propagandin'ny Firaisamben'ny Repoblika Sosialista ato Amerika Latina. Ho ela velona ny Ursal (hanao t-shirt isika, afaka maneho hevitra eto avokoa izay te-haneho hevitra)
Tamin'ny fampidirana ireo ekipam-pirenena tsara indrindra eto ambonin'ny tany amin'ny baolina fandaka, dia hanana ny amboara FIFA imbetsaka indrindra ny Ursal:
Vao teraka ny Ursal dia efa in-tsivy tompondaka erantany: 1930, 1950, 1958, 1962, 1970, 1978, 1986, 1994 ary 2002
Ary manana mpilalao tsara indrindra azo alahatra:
Manana ny mpanafika anisan'ny ikoizana indrindra.
Azo atao ny mividy t-shirt Ursal :
ARAHABAINA IANAREO MATOKY NY URSAL! AFAKA MITAFY ITY AM-PIREHAREHANA IANAREO !
Na mangataka pasipaoro :
Eto ianareo afa-mahazo ny “menakely”, ny pasipaoro ahafahanareo mivezivezy amin'ny firenena sosialista rehetra.
Ary nifarimbonana tanteraka tao amin'ny Twitter ny hiram-pirenena Ursal:
Haody ô! nanomboka ny hiram-pirenena aho, dia tohizanareo:
URSAL, URSAL, amin'ity tany ity izay manomboka novambra ny karnavaly
URSAL, URSAL, miditra ny mozea ianao, sakafo tsy hita noanoa no hitanao
URSAL, URSAL, ny fiaranao, ny frizideranao, ny fanahinao an'ny fanjakana avokoa
URSAL, URSAL, George Soros no mandoa ny volan'ny fety
URSAL, URSAL, mihira ny internasionaly ny zaza teraka rehetra
URSAL, URSAL, azo antoka, maimaimpoana ary ara-dalàna ny fanalan-jaza
URSAL, URSAL, sarin'i [Pepe] Mujica [filoha Orogoaiana elatra havia teo aloha] isaky ny foiben-toeran'ny tafika
Ny Tsingerim-piainan'ny tsikombakomba iray
Noforonin'ny profesora breziliana Maria Lúcia Victor Barbosa tamin'ny taona 2001, ho toy ny vazivazy ny voambolana Ursal. Tao amin'ny lahatsoratra iray navoakan'ny bilaogy elatra havanana maro tamin'izany fotoana izany, nampiasa ny voambolana izy hanalana andro tamin'ny vovonana Forum nototonsaina tao São Paulo, fivorian'ny antoko sy fikambanana elatra havia ara-politika amerikana latina sy karaibeana, tamin'izany taona izany.
Nandritra ny vovonana taona 2001, nanao kabary mirehidrehitra manohitra ny Faritra Malalaka Ara-Barotra ao Amerika, volavola natolotry ny fitondrana Bill Clinton tao Etazonia hampihenana ny sakana ara-barotra eo amin'ny firenena amerikana, i Luiz Inácio Lula da Silva, mpanorina ny Antokon'ny Mpiasa sady efa Filohan'i Brezila teo aloha.
Tao amin'ny lahatsoratra ny profesora Barbosa niteny hoe:
Avy amin'ny fahefana ara-maoraly ananany, nanambara i [Lula], izay niteraka ny fifalian'ny elatra havia sy ny elatra havanana ara-politikan'i Amerika Latina: ‘Tetikasa fanajanahana ataon'i Etazonia io. Io no famaranana ny fampiatiana Amerikana Latina”. Saingy inona moa izany ny fampiatiana amin'ny maodelin'i Castro-Chávez-Lula? Angamba ny fananganana ny Firaisamben'ny Repoblika Sosialistan'i Amerika Latina? (URSAL)
Tao anatin'ny roa taona ny Ursal no nifampiresahana tao amin'ny dinika sy bilaogin'ireo elatra havanana ho zavamisy, izay lazaina ho tanjona faratampon'ny Forum tao São Paulo.
Tamin'ny antsafa nifanaovana tamin'ny gazety breziliana Folha de S.Paulo tamin'ny 13 aogositra 2018, nanamafy ny profesora Barbosa fa nanolotra ny voambolana ho fanesoesoana izy.